वि.स. २०७८ साल वैशाख ९ गते, बिहीबार
माघ ९, २०७७ ११:३७:३० • ५४० पटक पढिएको
सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। शुक्रबार कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँट भएको हो।
बिक्री प्रवन्धक क्यापिटलका अनुसार १ लाख ३९ हजार ६०२ जनालाई १० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँट गरिएको छ। त्यसबाट बाँकी रहेको २ कित्ता शेयर भाग्यमानी दुई आवेदकमा बाँडफाँट गरिएको छ। अर्थात भाग्यमानी दुई जनाले ११ कित्ता शेयर प्राप्त गर्न भएका छन्।
आईपीओमा आवेदन दिएका मध्ये १२ लाख ११ हजार ११५ जनाकोमात्रै आवेदन स्वीकृत भएको क्यापिटलले जनाएको छ । यसको अर्थ ४० हजार भन्दा धेरै आवेदकको आवेदन रद्द भएको छ । जसमा योग्य आवेदकहरु मध्येबाट १ लाख ३९ हजार ६०० जनाले मात्रै १० कित्ताका दरले शेयर पाउएका छन्। बाँकी १० लाख ७१ हजार ५१५ जनाको खालि भएको छ।
नतिजा यहाँबाट हेर्न सकिनेछ
मन्त्रीसमेत रहेका चार सांसद माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ३ मन्त्रीले दिए राजीनामा
जुम्लामा आगलागी, ३५ घर जलेर नष्ट
बधाई ! थ्री नेसन्स कपको उपाधि नेपाललाई
स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सरकारको आग्रह
५२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेविसंघ अछामद्वारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
नेपाली काङ्ग्रेस मंगलसेन नगर कार्यसमिति द्वारा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
तुर्माखादमा संचालित सुन्तलाजात फलफुल बगैंचा ब्यवस्थापन तालिमको समापन
तुर्माखाद गाउँपालिका लाइ पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा
ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस अछामको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न
राप्रपा अछामका नेता चलाउने काङ्ग्रेसमा प्रवेश :देउवाले गरे स्वागत
जन्मदिनको अवसरमा कारागार अछाममा कैदि हरुलाइ फलफूल बितरण
चर्चित कोरियोग्राफर रेमो डिसुजा अस्पताल भर्ना
वरुण धवनको गाडी दुर्घटना